Wararka - Maxay Yihiin Midabka Fal-celiska ah?
Dye/Dyestuff waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee warshadaha dunta iyo warshadaha kale.Waa iskudhis ku dhejin kara dhar kasta si ay u midabeeyaan marada.Waxaa jira midabyo kala duwan oo suuqa yaala si aad u kala doorato, laakiin kuwa ugu caansan ayaa ah kuwa kiimikada deggan ee midabaynta dharka wakhtiga ugu gaaban.Labada arrimood ee ugu muhiimsan ee dheeha tayada leh ee firfircoonida leh waa heerkulka iyo waqtiga.
Isticmaalka midabada ayaa ah tilmaame muhiim u ah fahamka horumarinta dhaqaalaha bulshada.Wadamada soo koraya sida Hindiya iyo Shiinaha, isticmaalka dheeha ayaa si degdeg ah u koraya sababtoo ah shaqada horumarinta oo kordhay, magaalooyinka, iyo ballaarinta dadweynaha.
Iyada oo ay sabab u tahay awoodda lagu kala saari karo isha dheeha iyo sida loo marsado, waxaa jira noocyo badan oo midabyo ah.Midabada laga helo ilaha dabiiciga ah sida dhirta ama ubaxa waxaa loo yaqaan dheeha dabiiciga ah, ma aha midabada synthetic.Sidoo kale, waxaa jira midabyo lagu kala saari karo iyadoo loo eegayo codsiyadooda.Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee la isticmaalo ee ku salaysan codsigooda waa midabyo fal-celin leh.
Faa'iidooyinka midabaynta falcelinta:
1. Sababtoo ah awoodda ay u leedahay in ay la falgasho dhexdhexaadiyaha, waxay siinaysaa midabyo falgal ah faa'iido weyn sababtoo ah waxay noqdaan kuwo aad u adkaysta oo muuqaal ahaan kala duwan.Habkani wuxuu siinayaa faa'iido xooggan oo lagu mamnuucayo midabka iyo midabka cellulose.
2. Waxaa jira faa'iido kale oo xoog leh oo ka mid ah midabada falcelinta, taas oo ah, xawaaraha qoyan, kaas oo lagu gaaro hab wax ku ool ah oo toos ah midabaynta.
3. Midabaynta falcelinta waxay ku haboon tahay in lagu midabeeyo waxyaabaha fiber cellulose-ka cusub ah sida lyocellfibers.
4. Fudud in la nadiifiyo: Fiber-ka lagu dheehdo midabyo fal-celin ah ayaa si badbaado leh loogu midabayn karaa dhar cad iyada oo aan khatarta ah in la midabeeyo.
In kasta oo isticmaalka dheeha firfircooni uu leeyahay faa'iidooyin badan, waxa kale oo jira qaar ka mid ah faa'iido-darrada, sida saamaynta midabaynta fal-celinta ee deegaanka.Si kastaba ha noqotee, soosaarayaasha dheeha firfircoon ee Hindiya iyo adduunka oo dhan waxay galiyeen tamar badan iyo agab cilmi baaris si ay uga caawiyaan inay horumariyaan alaabada xasaasiga ah deegaanka iyagoo macaamiisha siinaya qiimo la taaban karo oo joogto ah.Caqabadaha kale ee soo wajaha warshadaha waxaa ka mid ah helida shaqaale xirfad iyo karti leh, sharciyada dawladda, iyo kharashaadka wax soo saarka.Inkasta oo warshaduhu ay leeyihiin mustaqbal ifaya, haddana waxaa muhiim ah in horumar laga sameeyo dhammaan dhinacyada kor ku xusan si looga fogaado wax kasta oo caqabad ku ah.
Midabaynta falcelisa waxay si kiimiko ah ula falgashaa cellulose, samaynta xidhidh kovalent ah oo u dhexeeya molecule dheeha iyo cellulose.
Midabaynta falcelintu ma yihiin kuwo deegaan ahaan u wanaagsan?
Haddii aan tixgelinno isticmaalka midabada falcelinta, markaa midabada falcelinta waa inay ahaadaan kuwo deegaanka u fiican.
Waa maxay isticmaalka curaarta covalent ee midabaynta falcelinta?
Xirmooyinka covalent waxaa loo isticmaalaa midabyo fal-celin leh si ay u sarreeyaan.
Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta, Wakiilka Saabuunta Acrylic, Midabka Heerkulka Sare, Dheejinta Xakamaynta, Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah, Kaaliyeyaasha Kiimikada,